Ngomile kunye nokukhwabanisa kwesikhumba ebusweni, abaninzi abafazi bajamelana. Amadoda ayengenakwenzeka kakhulu kulo mcimbi, kuba izigulane ezizihlambululayo zilungiselelwe ngokwahlukileyo, kodwa abafazi kufuneka bathatyathwe ngokucophelela esikhumbeni sabo nasiphi na iminyaka. Ukucwina nokukhwabanisa kwesikhumba ebusweni kunokubangelwa zizizathu ezahlukeneyo. Kule nqaku, siza kujonga ezi zizathu, kwaye sithethe ngeendlela zokulwa nale ngxaki.
Abantu abanomqolo wesikhumba owomileyo, babone ukuma kwaye baqhekeza ngokuphindaphindiweyo, kwaye, ngaphezu koko, kukho into enjengokuzalwa. Emva koko ubomileyo abuchaphazeleka kuphela ngesikhumba ebusweni, kodwa nakwimzimbeni. Kwaye kunye nobudala, le ngxaki iya kuba yongxamisekileyo.
Iimbangela zesikhumba se-peeling
Ukuvela kwe-peeling kunokufaka isandla kwisimo sezulu, imozulu kunye nezinye izinto, kungekhona kuphela xa ulusu luyakwazi ukuma. Ngaliphi na iminyaka, sichazwa kwizinto ezifana neqhwa, umoya, ilanga, umoya omile kakhulu kwiindawo zasebusika kunye nokunye okuninzi. Ezi zinto zibangela ukuba isikhumba siphume ngokuphindaphindiweyo kaninzi kunanoma yini enye.
Kwindawo yesibini kubangelwa ukucaphukisa, ukuguquka, ukuvutha, okungavela ngenxa yezityalo zezimbali, ukutya, ukutyhefu okanye amayeza. Ngokuqhelekileyo, ukusika, ukukratshi kunye namanxeba kunokusebenza njengesizathu.
Kwiimeko apho ulusu alugcini nje ukukhawuleza, kodwa lukhuni, kuyimfuneko ukuthetha ngokukhawuleza kwingcali. Ingabangela ukusuleleka, ngoko-unyango alukwazi ukwenza.
Ngendlela, ezinye iimveliso zonyango ezisetyenziselwa izifo zesikhumba zingaphinde zithuthukise. Oku kuyinto evamile, kunye nokuhlaziywa nokuhlanjululwa komzimba, kodwa qiniseka ukuxelela udokotela malunga nalo.
Isizathu esona sikhulu sokuba ulusu lobuso lubonakalise
Isizathu esibaluleke kakhulu sokukhupha isikhumba kukungcoliswa kwamanzi. Kwaye into yokuqala yokuyenza kukuba uyenze ukuyihambisa. Into yokuqala kufuneka uyilahle izinto ezingaphandle zangaphandle, ezifana nokuhlamba ngesepha, kwaye uye ekusebenziseni i-mousses ezithambileyo, i-lotions, ubisi, i-foams kunye neelisi zokuhlamba.
Kwiimeko apho ungeke ushiye ngokupheleleyo isepha, kufuneka usebenzise isepha, esekelwe kwisiphumo sokunyusa, okanye ioli, umzekelo, umnquma. Emva kwenkqubo yokuhlamba, ungazitshizi ithawula, kodwa kufuneka ufumane ubuso obomvu, uphonte nge-tonic, kwaye usebenzise ngokukhawuleza i-moisturizer ukwenzela ukuba ulusu alube lumile ngokukhawuleza.
Ukuba unamaqabunga esikhumba, gwema ukusebenzisa izimonyo ezine-lanolin okanye utywala. I-Lanolin kule ngxaki inokubangela ukungabikho komzimba, kwaye utywala utywala ulusu.
Ukuba, emva kokuhlamba ngamanzi, ulusu luyakhupha, ngoko kuyafaneleka ukuzama ukusebenzisa nayiphi na ioli yezolimo ukuze uhlambulule isikhumba. Ngokomzekelo, i-oil yeesame iyaqhawula kwaye isuse ukungcola.
Kufuneka ukuba isikhumba sikhuphe ukusebenzisa ukhilimu okhuselekileyo ofanelekileyo ngexesha elithile lonyaka. Kodwa khumbula ukuba kufuneka kusetyenziswe ngaphaya kwemizuzu engama-30 ngaphambi kokuba uphume.
Xa ukhetha ukhilimu wesikhumba, khawuqwalasele loo nto ininzi iqulethe iinxalenye zeoli. Ezi zixhobo ziya kuphazamisa ukukhuphuka kwamanzi kwesikhumba, ukwenza umqobo othile okhusela ulusu. Kwimeko enzima kakhulu, mhlawumbi ibe yi-petroleum jelly, okanye i-cream cream. Kodwa qiniseka ukuba udibene nengcali ukuba ulusu luqhubeka lukhupha emva kokusebenzisa i-moisturizers.
Izindlela zokurhoxisa ukoma kunye nekhanda elikhanyayo ebusweni
Ukukrazula isikhumba sokubheka ebusweni kukuqhathaniswa nekhilimu efanelekileyo kunye nenxalenye ye-hydrocortisone. Umxholo wale nkalo akufanele ube ngaphezu kwe-0.5%. Kubalulekile ukuba uhlaziye rhoqo iindawo zengxaki yesikhumba: iiveki ezimbini emva kwentsuku, kodwa ungagqithisi ngonyango olunjalo, kuba i-hydrocortisone ikwahlukileyo kwimizi yobisi, kungekhona imveliso yezilwanyana.
Wonke umntu uyazi ukuba indlela ekhuselekileyo neyona ndlela elula yokukrazula le ngxaki yindlela yokupheka yabantu.
Unokwenza enye yeenkqubo ezilula. Ukwenza oku, xuba ubusi ngamanzi, kwaye emva kokucoca ulusu ngeendlela ozithandayo, uhlambe ubuso bakho ngokunyakaza kweseyhula, uhlambe rhoqo iminwe yakho kwisisombululo samanzi. Le yindlela efanelekileyo yokutshintshisa iiseli ezifile. Emva kwenkqubo, hlambulula ubuso bakho ngamanzi ahlambulukileyo, wubomile ngethawula uze usebenzise ngokukhawuleza umququzeleli.
Ipropati efanelekileyo yokuqhafaza igqitywe ngebhotela kunye nobisi. Ukupheka i-oatmeal ubisi, kwaye u-mush ufudumele (i-tablespoon e-1) udibanise ne-ukhilimu okanye ioli yeoli kunye nobusi (1 ithispoon). Lo mxube kufuneka usetyenziswe ebusweni. Gcina imaski ngemizuzu eyi-10-15 uze uhlanza ngamanzi afudumele.
Akukho imfuneko yokusebenzisa i-oatmeal ebilisiwe, okanye unokuthi ugaye iiflegi kwi-grinder. Ukufumana imaski uza kufuna 1 tsp. izithako ezilandelayo: u-honey, ioli yeoli, i-yolk yolanga kunye nomhlaba. Lo mxube usetyenziswa ebusweni kwaye uhlabe emigqeni yokusikwa kwisistim. Bamba imizuzu eyi-15 uze uhlanza ngamanzi afudumele.
Ukutshiza, ukupheka ekhaya ngokweendlela zokupheka kwabantu, ungenzi buhlungu ulusu, ngokungafani neentengiso ezininzi.
Njengesiqholo, ungasebenzisa indawo yekhofi, amaqabunga amaqabunga etiyi elimnyama, iikompe, i-apula, i-watermelon. Basebenza kakuhle xa uhlamba ubuso bakho kumigca yokusila.
Njengoko ukuhlanjululwa kuluhlu oluhle kakhulu lwesonka esimhlophe, ukuba luxutywe ebisi. Faka isicelo se-gruel ebusweni bakho kwaye ususe ngamanzi apholileyo emva kwemizuzu engama-20.
Iimaski zokuphelisa ukoma kunye nekhanda elikhanyayo
Iimaski ezineemifuno zibalaseleyo zokulwa nokukhupha isikhumba. Kubalulekile ukugaya i-oatmeal, baxube ngamanqanaba alinganayo neekroti ezisikiweyo, nciphisa umxube nobisi uze ubeke konke esikhumbeni. Gcina imizuzu engama-20, uze ususe ngamanzi afudumeleyo.
Iinqathele kule recipe zingatshintshwa ngeetatata eziluhlaza, kwaye endaweni yobisi, sebenzisa i-yolk yeqanda. Ukongeza, unokudibanisa ukhilimu omuncu ngekompu egayiweyo (ukhilimu endaweni esikhundleni sekhilimu omuncu okanye i-kefir), okanye i-banana slurry kunye nokongezwa kweoli yeoli. Emva kokuba i-mask ihlanjwe, i-moisturizer ifanele isetyenziswe xa isikhumba sisahla.
Imfuneko yokusetyenziswa kweemaski kunye nokusetyenziswa kwemveliso yobisi kunye namafutha ebusika.
Ukuphelisa ukuhluthwa kwesikhumba sokunqunyulwa kwembewu yeflekisi. Ukwenza oku, thatha iipunipoli ezi-2. idayi kwaye ithululele amanzi abandayo (iiglasi ezimbini), upheke kuze kube ngumphumo we-gruel. Emva koko umxube umhluzi, upholise kwaye usetyenzise kliniki imizuzu engama-20. Hlanganisa ngamanzi afudumele.
Ukuba isikhumba sakho somile, sinobala kunye ne-flaky, ke i-masker mask kunye kunye neoli yendalo iyakunceda. Thatha 1 tbsp. ioli, 1 tsp. isardadi, faka amanzi ambalwa abilisiwe. Faka isicelo le mxube imizuzu emihlanu ebusweni kwaye uhlambe ngamanzi afudumele. Ukuba ulusu luya kubonakala, kucetyiswa ukuba ubeke umgca wemihla ngemizuzu engama-4-5, kwaye emva kokuhlamba, kuyimfuneko ukuba usebenzise ngokukhawuleza ukhilimu.
Ekulungele kakhulu ukunyusa nokuphucula isikhumba esifanelekileyo imask kwioli yemifuno (2 tablespoons), ubusi (0.5 tbsp) kunye nezikhupha (2 pcs.). Konke oku kufuneka kutyunwe ngokucophelela, ukutshiswa kancinci kwindawo yokuhlambela amanzi kunye nokubeka umxube kwiindawo zobuso. Faka isicelo ngasinye kwisangqa ngexesha lesithuba emizuzu emi-5. Ewonke, sebenzisa iziqendu 3-4 kwaye ubambe imizuzu engama-20. Unako ukuhlamba loo maski ngoncedo lwamanzi afudumeleyo, kodwa kungcono ukusebenzisa i-decoction ye-Lindind, ukuhambisa i-tampon kumhluzi.
Ngokuhambelana nokutya kwesikhumba, kufuneka wenze i-mask of moisturizing. Kufuneka kwenziwe rhoqo rhoqo 2-3 ngeveki, ukuya kuma-30 ngamawaka.
Isondlo sekhumba elomileyo nelinen
Ukuqhawula isikhumba kubangelwa kukungabikho kwamaminerali kunye namavithamini ekudleni. Ngokukodwa, oku kusebenza kwiithamini ze-B. Ukuze uzalise ubunqongophala, kufuneka udle iintlanzi ezintsha, amaqanda, isibindi, iimveliso zobisi, imifuno eluhlaza kunye nesonka esimnyama esenziwe kwi-grains epheleleyo, kunye namantongomane, iziqhamo kunye nerayisi ebomvu.
Unokuthatha iindidi ezininzi ze-vitamin kunye nezamaminerali, kodwa khumbula ukuba ukutya okutsha kuqulethe zonke izinto eziyimfuneko kumzimba, kwakhona kwifom elula.
Kwimeko nayiphi na, ngokukhupha kwesikhumba, khula, ungakhathazeki. Simele sifumane ngokukhawuleza imbangela, okanye, xa kuyimfuneko, ukubonisana nengcali ukuze kuqaliswe inkqubo yokulahla.
Ukuhlaselwa kwesobuso: izibonakaliso, ukuchasene, inqobo yenkqubo
Unyango lweengcambu zezilwanyana zesifo
Ukukhulelwa: njani ukuphepha ingxaki?
Hlaziya ubukhulu, ibali lempumelelo
Isaladi ngamakhowe kunye nenkukhu